C/weli Gaas oo heshiis dhowr qodob ka kooban la saxiixay shirkadda DP World (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas oo heshiis dhowr qodob ka kooban la saxiixay shirkadda DP World (SAWIRO)
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta heshiis ku saabsan horumarinta dekadda magaalada Boosaaso la saxiixday shirkada DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Heshiiskaasi oo ka dhacay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka kooban dhowr qodob, waxayna labada dhinac isku afgarteen qodobada soo socdo:-
1- Waxay Puntland ogolaatay in shirkaddani DP World ay la wareegto maamulka dekadda magaalada Boosaaso, waxaana ay maamulaysaa muddo 30 sano oo ka bilaabaneysa maalinta heshiiska la saxiixay.
2- Waxay shirkadda DP World dhiseysaa dekad cusub oo ballaceedu yahay 450 mitir, joogeeda hoosena yahay 12 mitir.
3 – Waxaa la dayactiri doonnaa oo la ballaarin doonnaa dekadda magaalada Boosaaso ee hadda shaqeeysa.
4 – Kharashka ay shirkadaan gelinayso dekadda magaalada Boosaaso ayaa gaaraya illaa $336 million doollar, oo wejiga kowaad la bixinaayo $200 million.
5 – Waxaa dhismaha dekadda magaalada Boosaaso lagu dhameystiri doonnaa muddo 24 bilood oo ka bilaabaneysa markii heshiiska la saxiixo.
Maamulaha shirkada DP World Sultaan Axmed Bin Suleymaan oo goobta uu heshiiska ka dhacay ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay heshiis la galaan dowladda Puntland.
Sidoo kale, wuxuu maamulaha sheegay in hormarinta dekadda magaalada Boosaaso ay wax badan kusoo kordhin doonto dhinaca ganacsiga iyo isu socdka dalalka Afrika iyo guud ahaan mandaqada oo dhan.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo isna goobta ka hadlay ayaa marka hore u mahadceliyay maamulayaasha shirkadda DP World soo dhaweynta wanaagsan oo ay u sameeyeen isaga iyo wafdigii la socday.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Gaas ayaa sheegay in mashuruuca dekedda magaalada Boosaaso uu qeyb ka yahay mashaariicda kale oo ay dowladiisa qorsheeynayso inay ku hormariso kaabayaasha dhaqaale ee Puntland.
“Waxaa la gaaray xilligii aan u jiheysan laheyn horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, waxaan rabnaa markaa in Puntland wejiga ay maanta leedahay weji ka bedelan ay yeelato, waxaan rajeynaynaa markaa Insha Allaah, in mashruucani uu ka qeyb qaato horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka” Sidaas waxaa yiri madaxweyn Gaas.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiskaan ayaa kusoo beegmaya, xilli xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay mooshin ka diyaariyeen heshiiskaan mid la mid ah oo ay shirkadda DP World hore ula gashay maamulka Somaliland.